४० सहकारीले पायो प्रोबेशन ब्राण्ड, कुन-कुन सहकारीले पाए ? - सहकारी खबर
४० सहकारीले पायो प्रोबेशन ब्राण्ड, कुन-कुन सहकारीले पाए ?
Share : 2,044
काठमाडौं : नेपाल स्तरको ब्राण्डिङ पूर्ण तथा व्यवसायिक साकोस विकास कार्यक्रम (प्रोबेशन) ब्राण्ड यस वर्ष ४० वटा सहकारी संस्थाले पाउन सफल भएको छ । गत वर्ष ३४ वटा सहकारीले ब्राण्ड पाएका थिए ।
नेफ्स्कूनले सदस्य साकोसहरुको दीगो विकास, व्यावसायिकरण र गुणस्तर सुनिश्चितताका लागि यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । विगतका वर्षमा सहकारी विभाग र नेफ्स्कूनले संयुक्त रुपमा ब्राण्ड प्रदान गर्दै आएको थियो । यस वर्ष नेफ्स्कूनले मात्रै ब्राण्ड वितरण गरेको हो ।
कुन-कुन सहकारी पाए ब्राण्ड ?